Reggae ivuliwe! Ukhenketho lwaseJamaica lukhuselekile ngaphandle kwemigaqo emitsha yokufika ekhaya
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseJamaica zokuPhula » Reggae ivuliwe! Ukhenketho lwaseJamaica lukhuselekile ngaphandle kwemigaqo emitsha yokufika ekhaya
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Caribbean • Iindaba zikaRhulumente • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zaseJamaica zokuPhula • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Tourism • Intetho yezoKhenketho • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
Ngezinye zezona ndawo zikhuselekileyo zonke ezibandakanya wonke umhlaba njengeSandals kunye neLwandle iqela, ukhenketho eJamaica kulindeleke ukuba luqhubeke lukhula ngaphandle komgaqo omtsha wokubuya ekhaya obhengezwe namhlanje yiNkulumbuso yaseJamaica uMichael Holness.
Xa kuthelekiswa ne-United States ukusasazeka kwe-COVID-19, inani lokufa, iJamaica iqhuba kakuhle. Kubalwa kwisigidi sabantu iJamaica ikwindawo ye-123 emhlabeni, xa kuthelekiswa ne-USA 14.
IJamaica ilawule ubuncinci 369,960 iidosi zokugonya ze-COVID ukuza kuthi ga ngoku. Ukucinga ukuba wonke umntu ufuna iidosi ezi-2, oko kwanele ukuba ugonyiwe malunga 6.3% Abemi belizwe. Eli linani eliphantsi xa kuthelekiswa nenqanaba elingaphezulu kwama-50% e-USA.
Kwiveki ephelileyo kuxeliwe, iJamaica iphakathi malunga Iidosi ezingama-4,933 zilawulwa Usuku ngalunye. Ngelo nqanaba, kuya kuthatha ukuqhubekeka iintsuku 120 Ukulawula idosi ezoneleyo nge-10% yabemi.
Ngelixa imida ihlala ivulekile ngelo xesha, kwaye ukhenketho lubuyile kweli lizwe leSiqithi seCaribbean, ixesha elitsha elibekiweyo ukuqala ngo-Agasti 11 ukuya ku-Agasti 31.
Njengothusayo njengoko kuvakala, oku kunokuba kuhle ukuba kungangomehluko omkhulu kubakhenkethi bonwabela iholide yaseJamaica kwiindawo ezininzi ekuchithelwa kuzo iiholide ezinje IziNtshontsho, kodwa sisilumkiso esicacileyo sikaNdunankulu waseJamaica uMichael Holness, ukuba isoyikiso se-COVID-19 siyinyani kwaye kuyathethwa ngaso.
Isebe likaRhulumente wase-US libongoza abantu baseMelika abakhenkethe eJamaica ukuba bagonywe ngokupheleleyo ngaphambi kokuhamba.
Amaziko aseMelika oLawulo lweNtsholongwane kunye noThintelo (CDC) akhuphe iNqanaba 3 lezeMpilo yokuHamba Isaziso seJamaica ngenxa ye-COVID-19, ebonisa inqanaba eliphezulu le-COVID-19 elizweni. Ithi: “Umngcipheko wakho wokufumana i-COVID-19 kwaye ube neempawu ezibi kakhulu unokuhla xa ugonywe ngokupheleleyo Isitofu sokugonya esigunyazisiweyo se-FDA. "
Namhlanje iNkulumbuso yaseJamaica u-Andrew Holness ubhengeze umthetho ohlaziyiweyo we-Covid-19 phantsi komthetho woLawulo lweNtlekele.
Ethetha kwinkomfa yemithombo yeendaba yedijithali namhlanje, uHolness uthe la manyathelo matsha azakusebenza kwisithuba seeveki ezintathu ukusukela ngoLwesithathu we-11 Agasti ukuya kwi-31 ka-Agasti.
Ubhengeze ukuba nge-11 ka-Agasti eza kuqala, iiyure zokufika ebusuku ziya kuqala nge-7 ngokuhlwa ukuya kwi-5 kusasa ukusuka ngeMivulo ukuya ngooLwezihlanu.
#Imitshato - Akukho bantu bangaphezu kwama-50 abaya kuvunyelwa ukuba baye emtshatweni.
Kwiintlanganiso zaMinyaka le eziQhelekileyo zeZiko, elona nani liphezulu labantu abavunyelweyo ukuba babekho emzimbeni ngama-50. pic.twitter.com/So7oDMOCUe
-Andrew Holness (@AndrewHolnessJM) Agasti 10, 2021
NgeMigqibelo, ixesha elibekelwe ixesha lokubuya ekhaya liya kuqala nge-6 ntambama ukuya kwi-5 kusasa ngosuku olulandelayo, ngelixa ngeCawa ixesha lokubuya ekhaya liya kuqala nge-2 pm ukuya kwi-5 kusasa.
Kuya kufuneka amashishini avale iyure enye ngaphambi kwexesha lokubuya.
Amanye amanyathelo okwangoku atyhilwa yinkulumbuso.
Ukusukela ngoLwesine odlulileyo, inani le-COVID-19 lemihla ngemihla lidlulile kuma-200, kwaye kangangeentsuku ezintathu, lenyukele ngaphezulu kwamatyala angama-300. Izibhedlele nazo ziphantsi koxinzelelo njengoko iindawo zebhedi zinqongophele.
Kwangoko, uHolness watyhila umfanekiso omdaka wemeko ye-COVID-19 yaseJamaica ngokuchaza ukuba zili-1,903 iimeko zentsholongwane ezishicilelweyo phakathi kuka-Agasti 1 no-Agasti 8.
Ngenxa yoko, iimeko ezingama-238 ze-COVID zirekhodwe ngokomyinge ngosuku.
U-Holness utyhola ukunyuka kwabantu baseJamaica abangahambelaniyo nemigaqo-nkqubo ye-COVID-19, kubandakanya nokuphambuka kwezentlalo nokuthobela amanyathelo okufika ekhaya.
"Olu hlobo lokuziphatha luya kukhokelela ekunyukeni kwamatyala," watsho, eqonda ukuba uRhulumente wayekulindele ukunyuka kwamatyala, okukhokelela ekuqiniseni okulandelayo kwendlela yokuthintela intsholongwane.
eTurboNews kufikelelwe kwi-Hon. UMphathiswa wezoKhenketho u-Edmund Bartlett ukuba acaciselwe, kodwa akakwazanga kufumana mpendulo, kwaye uzakuhlaziya kwakhona xa kusaziwa.
Akukho mntu ukhuselekileyo de sonke sikhuseleke ayikokuvavanywa nguMongameli wase-US uBiden kuphela, kodwa kukwakunye U-Edmund Bartlett, Umphathiswa Wezokhenketho eJamaica. Ukholelwa ngamandla ukuba ukusasazwa kweyeza lokugonya kuye wonke umntu ngoyena ndoqo. Umnumzana Bartlett ebesilwela ukungabikho kwamazwe ngokukodwa kushishino lwezokhenketho, olufana neJamaica ngokungakwazi ukonyusa ukuhanjiswa kwezitofu zokugonya.
Owona Uhloniphekileyo u-Andrew Michael Holness wanyulwa njengelungu lePalamente (i-MP) ukumela i-Constituency yase West Central St. Andrew ngo-1997, eneminyaka engama-25. Inkulumbuso emva kweJamaica Labour Party yoyise i-People's National Party kwizikhululo zovoto ngoFebruwari 25, 2016.